Argentina ukuba kudlule umthetho izimayini ezintsha kuleli sonto - China JP Metal nethulusi
Iziphathimandla Argentina, umkhakha abadlali nezinyunyana kulindeleke ukuba asayine kuleli sonto a eside elindelwe federal izimayini sivumelwano ukuthi ube nobunye imithetho ekhona ezweni lonke, njengoba ingxenye umzamo oqhubekayo gxuma-uqale kwezimali emkhakheni wezolimo.
Isizwe, kanye intandokazi zimali izimayini, liwile ngemuva omakhelwane bayo Chile nasePeru naphezu equkethe ezifakwa ocebile zethusi, igolide, isiliva ne-zinc.
Kuze kube manje, imithetho yendawo nje kuphela ezinzima, kodwa futhi ezihlukahlukene, ne eziyisikhombisa izifundazwe 23 wezwe kokuba ukuvinjelwa esigcwele ku ukusetshenziswa cyanide phezu ukuba nezinzuzo zemvelo.
Selokhu yathatha isikhundla ngasekupheleni 2015, uMongameli UMbongeni Macri iye ukwamukela izinyathelo ukuvuseleleka embonini yezimayini wezwe. Omunye abokuqala kwaba ekuqedeni intela 5% ku izinkampani zezimayini kanye namandla ngoFebhuwari wangonyaka ofile.
Wabuye Ubuyise ukunqatshelwa ku izinkampani zezimayini angaphandle ukuthumela inzuzo eyenziwe e-Argentina abavela emaphandleni.
Manje, abaphathi bakhe imayelana ukuba kudlule umthetho izimayini lonke ethemba ukuba iholele umgomo Macri wafuna ukuvelela kakhulu - utshalomali double emkhakheni $ 25 billion ngonyaka iminyaka eyisishiyagalombili.
Ngaphansi uMongameli wangaphambilini UCristina Fernandez, ngubani anda indzima yembuso , Argentina wathola kuphela $ 10 billion 2007-15 isikhathi. Phakathi neminyaka engu-efanayo, ukutshalwa kwezimali izimayini eChile bezingaphansi $ 80bn futhi ePeru $ 52bn.
Umthetho omusha, ephepheni lendawo La umbono Austral ibika (ngeSpanishi), kuthiwa zizinze intela ukuze zimali, ukukusiza ukugwema izingxabano nohulumeni basekhaya kanye lizuze ukwesekwa kwemiphakathi ngenxa yezimayini, ngendlela efanayo njengoba benza uhulumeni wangaphambili nge embonini kawoyela. Kodwa abahlaziyi ngesikhathi BMI Ucwaningo sixwayisa izingozi okuseduze ezingase sinqande izinhlelo Mecri sika:
"Q117 idatha kwezomnotho Esibuthakathaka Kakhudlwana kunokuba kulindeleke kusikisela nezinkinga nezingozi ide ukuze umhlahlo yethu ngempela nokukhula kwe-GDP ka-3.1% 20 17 kanye nokwenzeka Inqubomgomo ukuhlehlela ukuthi kungabenza buthaka ezingaba ukukhula," babhala. "Uma ukukhula organic akusho yokuzigxilisa phezu ezinyangeni ezizayo, umfelandawonye Macri ingahlukana buthaka ngo-Okthoba okhethweni kwaphakathi term, okungase ukubona imigomo yezomnotho inch ngase izinqubomgomo yokungenelela ngaphezulu amandulela (...) Ngokwesigaba embonini yezimayini, yimuphi shift kude ibhizinisi Macri sika kwekuhlela kabusha friendly sizokuba yisifundo utshalomali futhi ukungaqiniseki eziholela okhethweni kwaphakathi term ngeke cishe alibale izinqumo zokutshala izimali abanye sokugcina. "
ochwepheshe BMI sithi omunye ingozi kuyofika kokwamakhamera anda yokusetshenziswa kwamanzi zabavukuzi, okuyinto kungenzeka ukuba uthuthukise izingxabano phakathi izinkampani kanye nemiphakathi yendawo futhi okuholela iziqondiso ezengeziwe.
"Nakuba silindele gxila asekelayo embonini yezimayini ukukhula ezingeni federal kunciphise nezindaba yesifundazwe, abantu bendawo ababephikisa futhi kunengcindezi yezombusazwe zilimaze elikhangayo Argentina njengoba uya khona izimayini utshalomali," BMI kuphetha.